Paul Gala, mpamokatra sy mpiangaly mozika Paul dia manantona ny kalitaon'ny valin'ny PMCXXXXXUMUMUM - NAB Show News avy amin'ny Broadcast Beat, Broadcaster of NAB Show - NAB Show LIVE
Home » News » Paul Gala, mpamokatra sy mozika Paul Gala no manafaka ny kalitaon'ny valiny PMCNUMX
Paul Gala, mpamokatra sy mozika Paul Gala no manafaka ny kalitaon'ny valiny PMCNUMX
Ny mpamokatra mozika sy tompon'ny marika Paul Gala dia nametraka ny PMC result6 Compact akaikin'ny fanamarinam-baovaon'ny renirano any amin'ny studio any Afrika Atsimo ary faly amin'ny feo natolotr'izy ireo ho an'ireo rakitsoratra sy fifangaroany.
"Niditra vola tamin'ny fanaraha-masoX6 ny vokatra aho satria lafo be ny kalitaon'izy ireo, toa mahatalanjona izy ireo ary tena maivana ary matanjaka," hoy ny fanazavany. "Mbola manana kapila PMC TB2S-AII akaikin'ny mpanara-maso akaiky izay tiako aho nefa raha ny hevitro dia ny mpanara-maso ny vokatra 6 no mety ho mpitondra tenin'ny PMC tsara indrindra ary mahatsiaro fa hampiasa azy ireo mandrakizay aho."
Mpanao mpamorona sy mpanakanto ary mpamokatra ihany koa, nianatra ny injeniera mahay avy any amin'ny rainy, John Galanakis, i Gala, izay mpamokatra fanta-daza sy tompon'ny marika manokana, izay manokana momba ny mozika afrikanina. Taorian'ny nandany taona vitsivitsy tany Eropa - indrindra tany London, Berlin sy Tuscany - niverina vao niverina tany Afrika Atsimo i Gala ary nanangana studio tao Johannesburg izay miasa ho an'ny tarika azy, Hunter As A Horse, ary ny taratasiny rakitsoratra, Bad Future .
"Ny Bad Future dia azo antoka fa raharaham-pianakaviana," hoy izy. "Ny vadiko dia A&R, mpanoratra ary mpamorona ary izaho dia miara-miasa amin'ny anadahiko, izay mipetraka any Londres. Nahita sy mamolavola talenta tanora any Afrika Atsimo izahay ary manampy azy ireo hahatratra ny heriny rehetra amin'ny maha mpanakanto azy. Mozika indie ny ankamaroany fa mamoaka zavatra pop maizina kokoa izahay. Ny mpanakanto ankehitriny dia James Deacon, kanefa misy artista vitsy kokoa isika amin'ny fampandrosoana. ”
Ny marika dia mifantoka ihany koa amin'ny fahazoana ny famokarana sy ny mozika avy amin'ireo mpanakanto afrikanina tatsimo mankany amin'ny seho amin'ny fahitalavitra, ny haino aman-jery, ny sarimihetsika ary ny adverts any Eropa sy Etazonia.
Ny studio ao amin'ny Gala, izay ampiasaina amin'ny firaketana sy ny fampifangaroana tetikasa dia miorina amin'ny alàlan'ny analogie iray hibrida sy ny nomerika nomerika miaraka amin'ireo mpanova an'i Metric Halo. Misy ihany koa ny fisafidianana fitaovana amin'ny fantsom-pifandraisana an-tserasera, anisan'izany ny Modular Channel avy amin'ny Overstayer ary ny mpanome fitaovam-piadiana WES Audio mifehy nomerika, miaraka amina karazana prefa, EQ ary compressor isan-karazany, ao anatin'izany ireo singa mandrafitra ny valiny.
Nampian'i Gala fa ny fanaraha-maso ny valim-pifidianana 6 vaovao, izay nomen'ny mpanabe avy any Afrika Atsimo dia Benjamin Pro Audio, dia manome azy izay tena tsy ampy tamin'ny fanaraha-maso nataony.
"Hitako fa mangarahara izy ireo, misokatra malalaka amin'ny fifangaroana saingy koa, toa mihetsika, lafo vidy, ary tena mahafinaritra izy ireo rehefa milalao ny fifangaroan-doko na ny fitsipi-pitenenana."
Raha mila fanazavana fanampiny momba ny Bad Future, tsidiho azafady www.badfuture.net.
Fiaviana ratsy Graham Chapman navoaka ho an'nyEditor Paul Gala PMC Mpandahateny result6 Mpamokatra afrikanina tatsimo Ultra HD Forum	2019-08-12
Previous: Sokajy NHL miaraka amin'ny GB Labs
Next: Quantum ao amin'ny IBC2019: Manampy ny mpanjifa hamorona, hizara ary hitahiry ny atiny lahatsary